Mnangagwa Responds To Chamisa's Court Application, Denies Urging Zanu-PF Members To Bribe Chiefs ⋆ Pindula News
MDC-T argued that Mnangagwa had early this month urged party members to bribe chiefs and traditional leaders to procure their support in the elections. Responding to an urgent chamber application, Mnangagwa, through Zanu-PF’s secretary for legal affairs Paul Mangwana said the application was a way of undermining the elections before they were even held. Mnangagwa also argues that the Chamisa faction cannot file an election-related challenge because it did not register to participate in the forthcoming election saying only the MDC-T led by Dr Thokozani Khupe and the MDC Alliance led by Mr Chamisa are participants. They argued that the MDC-T leadership issue is still pending before the High Court and Chamisa and his faction cannot argue they are the legitimate MDC before a ruling.
Tagged: Crime Emmerson Mnangagwa Nelson Chamisa Traditional Chiefs
7 comments on “Mnangagwa Responds To Chamisa’s Court Application, Denies Urging Zanu-PF Members To Bribe Chiefs”
chamisa stop acting like a child do you think suing ED for false accusation will make win the elections.
zvakaoma sekukwesha musoro nebwe in as much as chamisa and the alliance strives to win the elections people must be aware that ED has already gained political millage because the world has already accepted him more than nelson and what more the family of zim
fighting ED and ZANU PF is wasting time as a dog trying to buck for an elephant it wont stop it from proceeding
chamisa thought suing ED will stop elections is that so kkkk
but why nelson ,why cant you put your alliance in order first before you take that extra mile
mdc yakagara yakadaro tsvangirai was better zvidzungu zva chamisa izvi zvichatirasisa gore rino
kkkk iyi yava personal na ED iyi zvichiri zve politics here izvi ummm i doubt